राहतमा राजनीति :: Press Chautari ::
ज्ञानेन्द्र शाह– पुर्व राजा
बाबुराम भट्टराई– पुर्व प्रधानमन्त्री
कमल थापा – शाहीशासनकालका गृह मन्त्री
उल्लेखित नामहरु पछिल्लो नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा बारम्बार दोहोरिईरहने पात्रहरु ह्ुन् । राजनीतिलाई मुख्य समाचार बनाउने सञ्चार माध्यमहरुमा त यी अनुहारहरु हरेक दिन जसो छाई रहन्छन्, आईरहन्छन् । ६ बर्ष अघि उपत्याकाको नारायणहिटी दरबार छोडेर नार्गजुन पहाड उक्लेका पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र बेला बखत देश दौडाहको लागि ओर्लीरहन्छन् । यस्तै श्रृङ्खलामा उनी गतसाता सुदूरपश्चिम नेपालका बाढिपिडितहरुलाई राहतो पोको बाँड्न पुगे । अनि उनीसँगै चर्चामा आए पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र राजतन्त्रका पक्षधर नेता कमल थापा ।
राजतन्त्रको अवशेष मात्र बोकेर पूर्व राजा बेलाबखत यसरी नै देशका बिभिन्न ठाउँहरुमा सवार गर्छन । मठमन्दिरहरुमा टिका प्रसाद ग्रहण गर्छन् । जनतासँग पुरानै शैलीमा बात मार्छन । सञ्चो बिसञ्चो, सुख दुःख सबै सबै सोधपुछ गर्छन । मानौं उनीसँग अभैm हातमा राजदण्ड छ र टाउकोमा सिरीपेच । कुन प्रचार वा दाउपेचको लागि उनी यसरी नार्गाजुनबाट बेला बेला निस्कन्छन् त्यो स्पष्ट छैन । त्यसो त टेलिभिजनका पर्दाहरुमा उनलाई घेरेर स्वागत गर्नेहरुको पनि लामै ताँती देखिन्छ । यस्तै लामो ताँतीमा अघिल्लो साता देशको सुदूर जिल्लामा देखिएका उनी उनका बुहारी हिमानी शाह राहतकै कारण चर्चामा रहे ।
अहिले ज्ञानेन्द्र शाहको हैसियत भनेको केवल पुर्व राजा मात्रै हो । उनले सामान्य नागरिक सरह नै जीवन बिताउँदै आएका पनि छन् । देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै देशको कार्यकारी प्रमुखमा जनताको छोरो पुगिसकेको छ । तर पनि ज्ञानेन्द्रसँग दलका नेताहरु किन डराउँछन् ? कस्तो हाउँगुजी हो उनीहरुलाई ? तिनैले होइन र अब देशमा राजतन्त्र फ्याँकियो देशमा गणतन्त्र ल्याइयो भनेर भन्दै हिडेको ? आम नागरिकको हैसियत बोकेर राहत बाँड्न बाढिपीडितको घरदैलोमा पुगेका ज्ञानेन्द्रलाई किन डा. भट्टराईहरु जेल हाल्नु पर्ने भनेर चिच्चाउँछन् ? यदि ऊ सर्वसाधरण जनता जस्तै हुन भने उनको राहतमा किन राजनीति जोड्ने ? के राहत पाउँदैमा जनता राजावादी हुन्छन र ?
यत्तिबेला सुदूर पश्चिमका गाउँहरुमा ठूलो बिपत्ती छ । सयौं घरपरिवार घरबार विहिन छन् । हज्जारौंको खेतबारी र बस्ती बाढीले बगाएको छ । यस्तै बेला ज्ञानेन्द्र शाहले बाँडेको राहतले पीडित परिवारमा केहि राहत त मिलेकै होला । सके यस्तो प्राकृतिक विपत्तीहरुमा त देशका सबै दलहरुले सहयोग पो गर्नु पर्ने होइन र ? खै समाचारहरुमा सुनिदैनन् र देखिदैनन् त कंगे्रस, कमनिस्ट र माउबादीले भुकम्प पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरेको । बाहलवाला मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु चाँहि हेलीकोप्टरमा सवार गर्छन् । बाढीले बगाएको घरको भग्नावशेष हेर्छन् र हेर्छन मान्छेका सिनोहरु । नाक मुख थुन्दै केन्द्र फर्कन नपाउँदै बैठक, सहमती, चारदल, तेत्तिसदल के के को बहानामा तारे होटेल छिर्छन र दार्छन इम्र्पोटेड ब्राण्डका खान्कीहरु ।
जनताले नबुझेको यहि हो । तिनै दल र दलका नेताले ज्ञानेन्द्र शाहलाई आम नागरिकको हैसियतमा बस्न भन्यो । तिनैसँग किन यत्रो डर ? यस्तै बेला गणतन्त्रको पक्षपाती माओवादीका एक हूल राजासँग सहमती गरेर अघि जाने प्रस्ताव अघि सार्दै हिडेकाछन् । अनि यहिबेला खाँट्टी प्रजातन्त्रवादी भनाउँदो कांगे्रसका बिपी पुत्र शसांक कोइरालाहरु पनि राजतन्त्रको सम्भावना र आशा साँचेर मुख फोर्दैछन् ।
र अन्तमा, मंसीर ४ को घोषित मिति नजिकिँदै जाँदा दलका नेताहरु घरदैलो पुग्नु अगावै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको राहत राजनीति धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नु जस्तै हो भने दलका नेताहरु ज्ञानेन्द्र शाहको देश दौडाहसँग हाउँगुजी लाग्नु “हार्ने गोरुको ....बानी” भने जस्तै हो ।
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०८:१९ / Tuesday, Jan 14, 2014 8:19 am